Vítkovice v Krkonoších, Krkonoše - Ngwudata egwu na mgbasa ozi maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ ntanetị
HomeblogVitkovice na Giant Mountains
Vitkovice na Giant Mountains	Hapụ ikwu
Obodo Vitkovice (German Witkowitz) dị na district nke Semily, Liberec mpaghara. Ọ dị Giant Mountains tinyere ndagwurugwu Osimiri Jizerka. Iji 28. 8. 2006 bi na 426. Ebe mbụ e dere aha obodo a sitere na 1606.
Na 1. ọkara nke 17. Ihe ngosi nke ndi eziputara na ndi na-aju ugbo na-arụ ọrụ n'ebe a. Obodo nta nwere otu mpaghara mpaghara (Vítkovice v Giant Mountains) ma ọ bụghị nke mpaghara. Own obodo Vitkovice bụ ụzọ II / 294 na ndịda ọdịda anyanwụ nke cadastral ebe, n'ebe ọdịda anyanwụ na-akpọ Upper Vitkovice, ebe ọzọ (ukwuu n'ime mmezi na dịsasịrị mmezi) bear aha Levínek, Zákoutí, Janova Hora, Mevaldův Hill, Glass Forges, Třídomí Lower Micechi na Horni Micecho.
Obodo nta nwere otu mpaghara mpaghara (Vítkovice v Giant Mountains) ma ọ bụghị nke mpaghara. Own obodo Vitkovice bụ ụzọ II / 294 na ndịda ọdịda anyanwụ nke cadastral ebe, n'ebe ọdịda anyanwụ na-akpọ Upper Vitkovice, ebe ọzọ (ukwuu n'ime mmezi na dịsasịrị mmezi) bear aha Levínek, Zákoutí, Janova Hora, Mevaldův Hill, Glass Forges, Třídomí Lower Micechi na Horni Micecho. Okporo ụzọ na-aga n'ihu site n'aka Horní Míseček ruo Vrbatova bouda.
Mpaghara mpaghara nke obodo dị n'akụkụ mpaghara obodo ahụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ Rokytnice (lee Rokytno v Giant Mountains na Frantisek v Giant Mountains) na Jablonec nad Jizerou (K. ụ. Upper Dušnice) n'ebe ndịda na ókèala nke obodo nke egbe na Giant Mountains (k. Ụ. Jestřabí na Giant Mountains, Roudnice na Giant na Křížlice) na Benecko (k. Ụ. Upper Štěpanice na Benecko) nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo Vrchlabí (k. p. Horejsi Vrchlabi) na Špindlerův Mill (k. u. na Elbe Bedřichov abịa).
Ke obodo nwekwara ekpuchi a ịrịba akụkụ nke Giant. Northern n'ọnụ nke obodo na-agụnye a ugwu Kotel (1435 m) na Kotelsko olulu Vrbatova ẹduọk na Harrachovy nkume. Nke ebe a, aga n'ebe ndịda nke Lower Mísečky Kotelsko iyi. West nke ọwa mmiri na ndagwurugwu Kotelského erukwa Kozelský riiji. Kozelského n'ebe ọdịda anyanwụ nke riiji-agba site n'ebe ugwu gaa n'ebe ndịda ndagwurugwu Kozelského iyi na-agba ọsọ si Dvoračky (nke Otú ọ dị, bụ ugbua na ókèala Rokytna). Western Area ókè-agba tinyere riiji, na n'elu Wolf Braun Mevaldův ugwu, na n'elu ugwu nne inyinya (897 m) n'elu Stromkovice na egbe. South nke obodo Vítkovice aga site n'ebe ọdịda anyanwụ ruo n'ebe ọwụwa anyanwụ Vítkovice iyi. Mbo, mgbe nke na-aga site n'ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo, na-agụnye ugwu Serino (1027 m) (site na ya na ndagwurugwu Jizerky projecting n'usoro Genoa Mountain, tinyere n'ebe ugwu nke ọwa mmiri aga Black ručej), Black Rock (1039 m), Mechovinec (1081 m), na ewu riiji (1034 m) (site na ndagwurugwu therebetween aga n'ime Jizerky Kozel okporo mmiri).
Ebube elu atọ ahụ dị n'ebe ndịda nke obodo Vítkovice. Eweliri elu ọzọ dị na mpaghara Janova Mountain. Otu elu dị na Dolní Mísečky. Banyere atọ dị mkpirikpi karịa na Horní Mísečky. Otú ọ dị, ogologo oge si Horní Míseček gaa Medvědín dịworị n'obodo Špindlerův Mlýn.
Okporo ụzọ na-aga n'ihu site n'aka Horní Míseček ruo Vrbatova bouda. Nke 16.07.2016 mere
Ele anya Rock ojii na Rokytnice nad Jizerou →